Tirada gabdhaha ka hara tacliinta oo sii badanaysa
Bahda waxbarashada ee magaalada Buuhoodle iyo deegaannada hoos yimaada ayaa sheegaya in tirada gabdhaha ka tagaya waxbarashada ay sii kordhayso dhawrkii sano ee la soo dhaafay.
Mukhtaar Axmed Xaaji Faarax oo ah maamulaha iskuulka hoose/dhexe iyo Sare ee Hawd ayaa Ergo u sheegay in sanadkii 2012 gabdhaha dugsiga Hoose/Dhexe dhigtaa ay ahaayeen 119 sanadkaanna ay yihiin 69 keliya, waxaana bil kasta iskuulka ka taga 3 gabdhood oo siyaabo kala duwan uga hara waxbarashada,wuxuuna sabab uga dhigay arrintaan saboolnimada iyo waaliddiinta oo hablaha u dira shaqooyinka guriga iyo xoolaha.
Sidoo kale waxaa jira gabdho dhaqso u guursada oo iyaguna sidaas uga hara tacliinta maamulaha ayaa sheegay in dugsiga sare waqtigaan ay fadhiyaan oo keliya 12 gabdhood.
Xaliimo Maxamed Jaamac oo ah hooyo dhashay 11 carruur ah oo shan gabdho yihiin ayaa Ergo u sheegay inay hal gabadh ahi ka aado iskuul gabdhaha kalena ay, saddex suuqa ayay khudaar igala iibiyaan, gabadha ugu yarna waxay raacdaa xoogaa adhi ah oo guriga ii jooga.
Cibaado Cali maxamed oo ah iyana hooya dhashay lix carruur ah oo laba gabadho yihiin ayaa Ergo u sheegtay inaysan aadin gabdhaheedu wax barasho mid kamid ahina ay ka saartay laba sano ka hor wax barashadda, ninka dhalay carruurta waa waayeel ma shaqeeyo waxaan ku tiirsanahay 150 dollar oo qaraabo qurbaha nooga soo dirto,Iskuuladda hoose ayaa bishii laga qaadaa 7 dollar halka kuwa sarrena laga qaado 11 dollar bishii
Mukhtaar Axmed Xaaji faarax ayaa yidhi “Waa in bulshadu u kacdaa sidii looga hortagi lahaa dhibaatadan hablaha ku sii yaraanaya waxbarashada, waana mid keeni doonta muddooyinka soo socda in lawaayo hablo dhigta iskuullada, taasina aqoontii bulshada ayey hoos u dhac ku tahay”.
Bahada waxbarashada ayaa si wada jir ah u codsanaya in la iska kaashado sidii arrinta wax looga qaban lahaa oo gabdhaha lagu eego il gaar ah laguna dhiirri galiyo in ay dhammaystaan tacliinta, lana sameeyo barnaamij ah in iskuullada ay ku dhigtaan si bilaasha ah si loo joojiyo in habluhu ay ka haraan waxbarashada.